Maxamed Ibraahimka Qorahey.com oo si Aada Loogu Canaantay Tacsidii uu ka Qoray Sheekh Maxamed Dubad. – Rasaasa News
Maxamed Ibraahimka Qorahey.com oo si Aada Loogu Canaantay Tacsidii uu ka Qoray Sheekh Maxamed Dubad.
Feb 17, 2011 dambiil, Dilka Liqoowe ayaa sida la xusuusto uu Admiraal MC si cad u sheegay in ururku ka danbeeyay. Rasaasa.com, Jwxo-shiil, Maxamed Ibraahimka Qoraxayonline oo si Aada Loogu Canaantay Tacsidii uu ka Qoray Sheekh Maxamed Dubad., ogaden peace, onlf peace
Warar sugan oo laga helay ilo ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, ayaa xaqiijinaya in Jwxo-shiil, si ba’an ugu canaantay Maxamed Ibraahim oo ah tafatiraha webka Qorahayonline tacsidii uu u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee Sheekh Maxamed Dudad, oo dhawaan lagu dilay magaalada Garissa. Maxamed Ibraahim ayaa lagu eedeeyay in uu muujiyay caadifad qabiil maadaama uu ka tacsiyeeyay geerida nin ka mid ahaa ragii doc faruuray halganka ay ku been abuurtaan, walibana ka mid ahaa maskaxdii ka danbaysay in Itoobiya lala heshiiyo waa sida ay hadalka u dhigeene.
Emailo iyo telefoono badan oo ka kala imanayay hogaanka ururka iyo waliba dad taageerayaal ah ayaa la sheegay in tafatiraha raaxada looga qaaday, kuwaas oo sida ilahani sheegeen qaarkood ahaayeenba hanjabaad iyo in uu si dhakhso leh uga saaro tacsida webka. “Nin aanu ku naqaanay wanaag iyo halgamenimo ayaad ahayd, balse baryahan sibaad u biyo daadinaysaa, hadii aad khadka si fiican u qabsan waydana ururku go’aan ayuu kaa gaari” ayaa ka mid ahaa hadaladii lagu canaantay Maxamed Ibrahin Mursal.
Waxaa xusid mudan in Sheekha la dilay iyo Maxamed Ibrahin Mursal ay laba oday kala tirsadaan [ilmo adeer labaad] isuguna yimaadaan odayga Cagoole ah, iyaga oo dhanka kalana labadooda hooyo wada dhasheen [Habro wadaag]. In kasta oo Tafatirihu uu u tacsiyeeyey eheladii marxuuka oo uu isagu ka mid yahay, ayaa hadana waxaa uu ka gaabsaday haba yaraatee inuu canbaarayn dusha ka saaro dadkii dilka Sheekha ehelkiisa ah ka danbeeyay. Lama hubo go’aanka uu Maxamed ka qaadan doono tacsidan uu diray, iyada oo culays badan lagu saarayo in uu meesha ka bixiyo. Sida lala wada socdo waxaa hoosta laga xariiqayaa in dilka Sheekha ay ka danbeeyeen kooxda uu ka tirsan yahay Maxamed Ibraahim ee Jwxo-shiil, iyada oo hada uu Booliska Kenya doon doonay Jwxo-shiil seedigiis oo sida la xaqiijiyey abaabulay dilka Sheekha. Isla markaana la sheegay in booliska wadanka Kenya ay ku raad joogaan xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil ee jooga dalka Kenya.
Ma aha markii ugu horaysay oo uu mugdi soo kala dhex galo Jwxo-shiil iyo xubin aad ugu shaqeeya oo ka tirsan kooxda, iyada oo sanad uun laga joogo markii garabkani dileen Allaha u naxariiste Liqoowe Muxumed Tayse, waqtigaas oo la sheegay in hogaanka garabkani dadaal badan ku bixiyeen sidii loo dajin lahaa, isla markaana looga dhaadhicin lahaa nin marxuumku adeer u yahay, kana mid ah xubnaha ugu firfircoon ee garabkan Asmara uga dhaqdhaqaaqa wadanka Norway. Waxayna isku dayeen in uuna ka tagin oo ayna saamayn xun ku yeelan dilka la dilay adeerkii, iyadoo waliba markii danbe lagu qanciyay in golaha dhexe ee ururka lagu dari doono taas oo aan wali dhicin. Dilka Liqoowe ayaa sida la xusuusto uu Admiraal MC si cad u sheegay in ururku ka danbeeyay.
Dilkii Sheekh Maxamed Dubad oo Cagaha la Galay Qoyska Reer Jwxo-shiil
Milicso Sulub Cali Cabaas, oo Fahmay Burburka ONLF 2005.